Madaxweynaha Soomaaliya oo dhibka dalka ka jira ku tilmaamay dacaayad, qilaaf siyaasi ah iyo Al-Shabaab – Kalfadhi
Madaxweynaha Soomaaliya oo dhibka dalka ka jira ku tilmaamay dacaayad, qilaaf siyaasi ah iyo Al-Shabaab
Madaxweynaha dalka, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, ayaa sheegay in ammaanka Soomaaliya hormar fiican laga sameeyey. Waxa uu sheegay in, marka laga soo tago hawlgalada Al-Shabaab, qilaafyada siyaasiga ah iyo wuxuu ugu yeeray “dacaayadaha aan salka lahayn”, uu dalku sidiisa kale nabad yahay.
Sida ay qortay SONNA, waxa uu Madaxweyne Farmaajo sheegay in tiirka nabad-gelyadaas xoojinaya uu yahay xiriirka cusub ee hadda u bilowday dalalka Soomaaliya, Itoobiya iyo Ereteriya, taas oo uu sidoo kale sheegay iney wax weyn u tahay dhaqaalaha 3-daas dal iyo xalinta qilaafka siyaasadeed ee gobolka.
“Soomaaliya” ayuu yiri Madaxweyn e Farmaajo “waxay waxa ka socda gobolka u tahay dan gaar ah”. Waxa uu sheegay in, iyada oo ka faa’iideysaneysa meesha ay ku taal oo istiraatiijig ah, ay u horseedi doonto barwaaqo.
Hadalkaas uu sheegay Madaxwene Farmaajo waxa uu la wadaagayey Madaxweynaha dalka Yugaandha, Yuweeri Musafeni, oo uu booqasho hal maalin ahayd shalay ku joogay dalkiisa. Sida ay daabacday SONNA, Madaxweyne Musafani waxa uu soo dhaweeyey xaalka uu dhigiisa Soomaaliya uga sheekeeyey, wuxuuna ku tilmaamay hormar fiican oo laga sameeyey siyaasadda iyo ammaanka gobolka.
Golaha Aqalka Sare ayaa sheegay inuu wax ka bedelayo Guddiya Hoosaadkiisa